Fomba fampiasana kofehy metaly: opérasiona fitrandrahana latabatra banga - TSINFA
fomba fampiasana latina vy: fiasan'ny milina lathe farafara
Fampidirana ny fikirakirana ny masinina Lathe
Tojo fikirakirana miasa
Toerana fiasan'ny rehetralatina vy:
1 Ny bokotra "fijanonana vonjy maika" lehibe.
2 Ny tantana miova spindle. Misy toerana telo mavitrika ho an'ny spindles haingam-pandeha avo, antonony ary ambany ary toerana roa aotra hanafoanana ny fiara amin'ny kapila.
3 Ny bokotra misy kofehy. Misy toerana roa an'ny "tanana ankavanana" sy "tànana havia". Rehefa mihodina ny spindle dia tokony eo amin'ny toerana "tanana ankavanana" ny tahony. Rehefa avadika ny spindle dia tokony apetraka amin'ny toerana "tanana havia" ny tahony, raha tsy izany dia tsy misy feed, ary ny thread dia tsy iharan'ny fameperana io.
4 Ny tohana fanitarana ny pitch. Misy toerana roa an'ny "J (pitch pitch)" sy "K (pitch expaced)".
5 Ny tantana miova spindle. Miaraka amina toerana valo, tanany 2 sy 5, hafainganam-pandeha 22 no ampiasaina.
6 Ny switch maotera paompy mangatsiaka.
7 Ny kofehy fanovana karazana kofehy. Misy metric (t) imperial (a) modulus (m) savaivony (p) avo efatra heny.
8 (A) sy 9 (B) no mpiorina napetraka ho an'ny boaty famahanana. Ovay ny refin'ny pitch na ny feed, ary ampiasao miaraka ny tahony 8 sy 9.
10 Ny tahony roa sosona. Ny pitch tanteraka dia ampitomboina ary ny feed dia avo roa heny amin'ny toerana valo.
11, 14 no lokom-pifaliana ampelatanana. Ampiasao ny spindle hanodinana ny fihodinana ary atsaharo ny fihodinan'ny spindle.
12 Ny dian'ny boaty slide.
13 Ny tantana famohana sy famaranana. Ampiasaina amin'ny kofehy.
15 Ny fehin-tànana amin'ny rambony. Ny tailstock finday dia ampiasaina.
16 Ny famitana clamping haingana amin'ny rambony. Afatory ny voanjo ho an'ny rambony. Rehefa iharan'ny enta-mavesatra ny rambony dia matetika tsy ampiasaina rehefa manapaka.
17 Ny famahanana fahana maharitra sy marindrano an'ny mpihazona fitaovana. Ny torolàlana momba ny fahatanorana sy ny sisiny avy amin'ny mpihazona fitaovana ary ny hetsika famahanana mandroso sy miverina dia tsapan'ny tantanana avokoa, ary ny hetsika haingana ao amin'io lalana io dia fehezin'ny bokotra misy azy.
18 Ny tantana kely mpihazona fitaovana.
19 Ny bokotra "fijanonana vonjy maika" lehibe.
21 Ny bokotra "start" lehibe an'ny motera.
22 Ny fanondroana index an'ny mpiharo kianja sy ny fametahana clamping.
23 Ny mpihazona fitaovam-piadiana (tantana slide afovoany). Hetsika aorinan'ny tanana (ahodin-tànana arivo sy ampitomboina, mitandrema rehefa miasa ny masinina hisorohana ratra).
24 Ilay boaty solosaina miendrika longitudinal handwheel: Ampiasao io handwheel io rehefa ahetsiketsika mitsangana ilay mpitazona fitaovana.
Chuck self-centering Chuck
Ny chuck miantehitra amin'ny valanoranony telo dia fitaovana mahazatra amin'ny amotera lathe, ary ny firafiny sy ny endriny dia aseho amin'ny sary.
Rehefa ampidirina ao anaty lavaka toradroa an'ny pinion 2 ny valizy chuck, dia mihodina ny fitaovana bevel be 3. Ny fitaovana bevel bevelle 3 dia misy kofehy fisaka amin'ny ilany aoriana, ary ny kofehy fisaka dia mifamatotra kofehy amin'ny tarehy farany amin'ny claw 4, mba hahafahantsika mihetsika miaraka ny foza telo ho an'ny hetsika centripetal na centrifugal. Ny kirakira fandrefesana metrica ampiasaina matetika dia misy ao amin'ny 150, 200, 250.
Fanombohana sy fijanonana amin'ny lathe metaly
1. Jereo raha toa ka marina ny farafara Lathe. Izany hoe, ny tady famindrana boribory 2 dia tokony ho amin'ny toerana tsy miandany (toerana 0), ny tsindry miasa 11, 14 dia tokony ho amin'ny fanjakana fijanonana, ny famohana sy ny famaranana ny voanjo dia tokony ho amin'ny toerana "on", ary ny môtô lehibe "fijanonana vonjy maika" ny bokotra 1 sy 20 dia ao amin'ny "Open" Status (bokotra mipoitra). Rehefa avy nanamarina ny lesoka ianao dia akatony ilay jiro lehibe aorin'ilay latina maina, araka ny hita eo amin'ny sary.
Fanovana lehibe herinaratra lathe
2. Tsindrio ny bokotra fanombohana maitso 21 amin'ny lasely hanombohana ny motera.
3. Ahodin-tsofina ny tady famindran-tory 2 ho an'ny fitaovana hafainganam-pandeha voafantina, atsangano ny tantana fanaraha-maso ny spindle 11 na 14 mankany ambony mba hahatsapanao ny fihodinan'ny spindle eo aloha; ny afovoan-tanan'ny fanaraha-maso dia eo afovoany mba hahatsapany ny fijanonan'ny ampela; midina ny fifehezana fanaraha-maso mba hahitana ny fihodinan'ny spindle.
4. Rehefa mamoaka sy mamoaka ny workpiece, manova ny fitaovana, mandrefy ny haben'ny workpiece ary manova ny hafainganana, kitiho ny bokotra "fijanonana vonjy maika" lehibe na fijanonana 20 voalohany.
5. Raha sendra vonjy maika dia tsindrio ny bokotra "Fijanonana vonjy maika" 20 an'ny motera lehibe hampiatoana ny spindle-n'ny lathe.
6. Rehefa mijanona mandritra ny fotoana maharitra ny lathe dia tsy maintsy vonoina ny switch main power lathe.
Ny fiasan'ny Spindle Box Shifting
Ny tantana miova spindle 2, 5 dia azo ampiasaina hanamboarana ny hafainganam-pandehan'ny 11 hatramin'ny 1400 r / min.
Ny fiasan'ny boaty slide
Fandraisana an-tanana 1. Longwheel de longitudinal an'ny counter-familiana famerenana boaty 24 ， Ahodino ilay boaty slide an-tanana famelatan-tanana 24, ary afindra ankavanana ny lasely. Ny takelaka tsirairay amin'ny lathe dial dia 1 mm.
Ampiasao ny fahana Longitudinal 150 mm, avy eo 130 mm no nakarihary.
Fiasa b Fiverenana 20 mm ny lavany ary 186mm ny halavany.
2. Ahodino ny mpihazona fitaovana araky ny famantaran'ora (hazandrano afovoany afovoany) 23 ， Ny mpitazona fitaovana dia miala amin'ny mpandraharaha (izany hoe ao anaty fitaovana). raha tsy izany dia esorina aoriana.
Ao amin'ny fanazaran-tena skateboard afovoany dia ilaina ny mivezivezy amin'ny hafainganam-pandeha miadana, mitaky ny fifandimbiasan'ny tanana roa ary ny fivezivezena malalaka, manavaka ny làlan'ny famerenana sy ny fihemorana, ary malefaka ny fihetsika ary marina ny hetsika.
Ny takelaka eo amin'ny lovia dia 0. 05 mm.
Operation a Ampifanaraho amin'ny ambaratonga aotra ny ambaratonga mihetsika ary fahano amin'ny làlana marindrano 2 m m.
Fiasa b Amboary ny refin'ny slide ho 25 ary ny fiverenana mitsivalana amin'ny 1mm.
3. Ahodino ny famantaran-tsorika kely amin'ny famantaranandro mba handrosoana ilay slider kely mandroso; avadiho ny familiana mpikorisa kely miodina amin'ny famantaranandro mba hamindrana ilay mpitazona fitaovana any aoriana.
Ny fanazaran-tena kely amin'ny skateboard dia mitaky miadana ary mihetsika mihitsy aza, mitaky ny fifindran'ny tanana roa.
Ny velarana tsirairay amin'ny dial skateboard kely dia 0. 05 mm, ary grids 100 ny herinandro.
Ny fifandraisana misy eo amin'ny refin'ny tarehy sy ny isan'ny sela.
Operation a Ampifanaraho amin'ny ambaratonga aotra ny refin'ny slide kely ary fahano mandritra ny 3 mm ny lava.
Fiasana b Amboary ny slide kely amin'ny haben'ny 42 ary ny làlan-torolalana miverina amin'ny 12. 5 mm.
Ny fiasan'ny boaty famahanana
Arakaraka ny fahana mitsivalana sy marindrano, farito ny toeran'ny handwheel sy ny tahony amin'ny boaty famahanana ary ampifanaraho. Ohatra, raha voafantina ho 0. 307 mm / r ny feed longitudinal, dia ampifanaraho amin'ny 7 metric (t) ny boaty fanovana karazana thread, na ny boaty 8 (A), 9 (B) ka hatramin'ny 1 , kitapo avo roa heny 10 ka hatramin'ny III.
Araka ny haavon'ny kofehin'ny milina, zahao ny takelaka misy ny boaty fahana.
Fiaraha-miasa amin'ny feed feeds
Afindrao ny mpihazona fitaovam-pitahirizana mihazona 18 ary ny torolàlana dia mifanaraka amin'ny torolàlana famahanana lava. raha tsindrio ny bokotra mandroso haingana eo an-tampon'ny tantana dia afaka mihetsika lava ny lasely.
Rehefa voasintona amin'ny toeran'ny infeed ny tahony 18 dia tsindrio ny bokotra mandroso haingana eo an-tampony mba hamindra ny mpitazona fitaovana haingana sy aoriana.
Ny fiasan'ny mpitazona fitaovana
Ahodino ny fanondroana fikajiana fitaovana toradroa sy fametahana clamping mifanohitra amin'ny famantaranandro 22, ny fihazonana fitaovana dia azo soloina mifanohitra amin'ny famantaranandro hanova ny toeran'ny fitaovana fihodinana; rehefa mihodina family famantaranandro ny tahony 22 dia mihidy ny mpihazona fitaovana.
Fanamboaran-tànana amin'ny tanany
Araka ny aseho amin'ny sary, ny tanany tailstock manamboatra ny tahony 25 dia azo ahitsy amin'ny famantaranandro mba hanamboarana ny tanany tailstock amin'ny toerana irina. Tsoahy ny fametahana tanany amin'ny rambony 25 familiana famantaranandro mba hamotsorana ilay rambony
Fandehanana mialoha sy famerenana amin'ny tanany
Atodiho ny famantaran-tànana ny rambony 15 mianadahy mba hamelana ilay tanany taolana; avadibadika mifanohitra amin'ny famantaranandro ny fihodinanan'ny rambon'ny rambony, ary mihemotra ny tanany rambony.
Raikitra tailstock toerana
Hisintona ny tailstock clamping haingana tantanana 16 mihemotra (lavitra ny mpandraharaha), hamaha ny rambony, afindra ny rambony mandritra ny fandriana mankany amin'ny toerana irina, ary avy eo ampivezivezy ny rambony (eo akaikin'ny mpandraharaha) Mipetaka haingana ny seza 16 ny seza alao haingana ny rambony eo am-pandriana.
Dingana fanesorana Chuck feno fitiavan-tena
1 Dingana sy fomba hanesorana ireo singa chuck miompana amin'ny tena
(1) Vahao ireo visy telo napetraka 6 ary esory ny vodin-koditra kely telo.
(2) Vahao ny visy telo mifatotra 7 Esory ny fonon'ny vovoka 5 sy ny vilia bevel lehibe 3 misy kofehy fisaka.
2. Fomba entina manefy valanoranony telo
Rehefa apetraka ny chuck, dia atsofoka ao anaty lavaka toradroa amin'ny vodin-kibo ny kiran'ny kofehy mba hihodinana, ary ahodin-kofehy ny kofehy planar an'ny volo bevel be. Rehefa avadika ny volon'ny kofehy fisaka hanakaiky ny elanelan'ny trano, ny valanoranon'ny laharana 1 dia ampidirina ao amin'ny vatan'ny trano. Ny valanoranony roa ambiny dia ampidirina ao amin'ny filaharan'ny No. 2 sy No. 3, ary ny fomba famoahana dia mitovy amin'ny teo aloha ihany.
Fihetsiketsehana famoahana sy famoahana chuck 3 amin'ny ampela
(1) Rehefa apetraka ny chuck, diovy aloha ny ampahany mampifandray ary alao solika mba hahazoana antoka fa marina ny fametrahana ny chuck.
(2) Aorian'ny fikororohana ny chuck amin'ny spindle, ny plastika an'ny flange chuck sy ny fiaramanidin'ny spindle dia tokony hapetraka mafy.
(3) Rehefa mamoaka ny chuck dia apetraho eo amin'ny sisiny misy ny mpandraharaha sy eo ambonin'ny lalamby ny tohotra, avy eo avadiho ny rantsankazo amin'ny toerana marindrano akaiky ary avadika moramora ny fifandonana . Rehefa malalaka ny chuck dia tsy maintsy ajanonao avy hatrany ny fiara ary avy eo ampiasao ny tananao hamadika ilay chuck.
(1) Rehefa mamoaka sy mamoaka ilay lovia mankaleo amin'ny spindle ianao, dia asio tsorakazo vy ao anaty lavaka fameloman-tory ary apetaho ny mpiambina ny fandriana mba hisorohana ny fahasimban'ny velaran'ny fandriana.
(2) Rehefa mametraka claw telo dia mandroso amin'ny lalana mifanohitra amin'ny famantaranandro ary araraoty ny volon'ny kofehy fisaka tsy hiodina.
(3) Rehefa mitondra ny chuck dia aza mitondra fiara hisorohana loza.
Fomba fanafoanana ny dia foana ataon'ny dial
Rehefa manodina ny lasely, ny afovoany afovoany ary ny tahony slide kely, indrindra rehefa mihodina imbetsaka ny mpihodina rotary, raha miverina tsotra izao ilay tahony dia hita fa mihodinkodina ny dial ary tsy mifangaro ny mpihazona azy. Mihetsika, izany dia vokatry ny elanelana misy eo amin'ny visy firaka anatiny sy ny voanjo, ka vokatr'izany dia tapaka lalan-dra.
Raha mihodina imbetsaka ny dial dia tsy maintsy averina amin'ny lalana mifanohitra izy ary avy eo afindra amin'ny ambaratonga takiana, araka ny hita eo.